अमेरिकी प्रजातन्त्रको कन्तबिजोग - Online Majdoor
अमेरिकी स्वतन्त्रता आन्दोलनका नेता र योद्धाहरूले कुनै दिन चुनावमा पराजय भएकै रिसमा अमेरिकी संसद् भवनमाथि अमेरिकाकै कोही सन्काहा नेताबाट हमला हुनसक्ला भनी सायद कहिल्यै कल्पना गरेका थिएनन् । बेलायती उपनिवेशवादविरूद्ध स्वतन्त्रता लडार्इँ लडेका अमेरिकी नेताहरूले बेलायती प्रजातन्त्रभन्दा अब्बल प्रजातन्त्र आफ्नो भूमिमा स्थापना गर्ने सङ्कल्प गरेका थिए । तर, स्वतन्त्र भएको २४५ वर्षपछि अमेरिकी प्रजातन्त्र वास्तवमै जीर्ण भएको छ ।
बुधबार अमेरिकी संसद् भवनमाथि ठूलो सङ्ख्यामा अराजकहरूको भीडले हमला ग¥यो । संसद् भवनभित्र पस्न तेस्र्याइएका सबै अवरोधलाई छिन्नभिन्न बनाएर उनीहरू संसद् भवनभित्र पसेर त्यहाँ झन्डै कब्जा जमाए । संसद् भवनभित्रका सांसदहरू भागाभाग भए । प्रदर्शनकारीहरूको एउटै रिस थियो – गत निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्पको पराजय ।
ट्रम्प समर्थकहरूका अराजक गतिविधिले आगामी दिनमा अमेरिकी प्रजातन्त्र कुन बाटो अघि बढ्ला भन्ने विषयमा विमर्श सुरू भइसकेको छ । के अमेरिकी प्रजातन्त्रले काम नै गर्न छोडेको हो ? के अमेरिकी प्रजातन्त्रप्रति अमेरिकी जनताकै विश्वास मरेको हो ? के अमेरिका परिवर्तनको सङ्घारमा उभिएको हो ? चार वर्षमा गरेको कुशासनबीच उनले चुनावमा प्राप्त गरेको मतले अमेरिकी प्रजातन्त्रका पक्षधरहरू हैरान छन् । अमेरिकी समाज किन अनुशासनहीन र अनुदारताको पक्षपोषणमा लागेको छ ?
निर्वाचनलाई प्रजातन्त्रको आत्मा मानिन्छ । यद्यपि, पुँजीवादी निर्वाचनहरू कहिल्यै पनि निष्पक्ष र धाँधलीरहित हुनसक्दैनन् । पैसा बढी खर्च गर्न सक्नेले नै पुँजीवादी चुनाव जित्ने सत्य नेपालमा जति सत्य हो, अमेरिकामा पनि उत्तिकै सत्य हो । तथापि, चुनावको नतिजा लत्याएर हिंसामा उत्रनु कदापि प्रजातान्त्रिक आदर्श मान्ने कुनै पनि दल र समूहको लागि शोभनीय होइन ।
ट्रम्पको सनकको कारण अमेरिकी जनताले बितेका चार वर्षमा धेरै अप्ठ्यारा सामना गरिसकेका छन् । ट्रम्पका अनेकन अनुदार र सनकको भरमा गरिएका निर्णयको कारण संरा अमेरिकी जनताले मात्र दुःख पाएनन्, बरू संसारकै महाशक्ति देश भएकोले यी चार वर्षमा ट्रम्पको सनकको कोपभाजनमा संसारका जनता पनि परे । उनको सनकबाट संसार र संरा अमेरिकी जनता त वाक्कदिक्क थिए नै, उनकै आसपासमा रहेका सहयोगीहरू उनीबाट टाढिए । उनको लागि झूटो कुरा गरेर संसारमा भ्रम छर्नु कुनै अनैतिकता नै होइन । ट्रम्प राजनीतिमा अराजकता र अनुशासनहीनताको उदाहरणको रूपमा लामो समय चर्चामा रहनेछन् । ‘जस्ता नेता उस्तै कार्यकर्ता’ भनेजस्तै ट्रम्पजस्ता छन्, उनका कार्यकर्ता पनि उस्तै देखिए । ट्रम्प जति अराजक र उद्दण्ड छन्, उनका समर्थकहरू पनि उत्तिकै अराजक र उद्दण्ड देखिए । बुधबार संसद्भित्र पसेर ट्रम्प समर्थकहरूले उद्दण्डता मच्चाए । त्यसो त निर्वाचनअघि पनि ट्रम्प समर्थकहरूले विभिन्न राज्यमा उस्तै हिंसा र अराजकता फैलाएका थिए । असहिष्णुता, अनुदारता र अराजकता नै ट्रम्प कम्पनीको विशेषता बनेको छ ।
विश्व पुँजीवादको नाभीस्थल संरा अमेरिकी संसदमा भएको बुधबार भएको घटनाले समग्र पुँजीवादी व्यवस्थाको कमजोरी र सीमितता उजागर गरेको छ । ट्रम्प पुँजीवादका प्रतिनिधि पात्र हुन् । आफ्नो नाफामाथि हमला हुँदा पुँजीपतिहरू कसरी बहुलाउँछन् भन्ने कुराको उत्तम दृष्टान्त हो–क्यापिटोलमा भएको हमला । संसारले यस्तै अराजक व्यवस्थालाई पक्षपोषण गर्ने हो वा न्यायपूर्ण र सभ्य विकल्पको खोजी गर्ने हो ? पुँजीवादको नाफामुखी र अराजक व्यवस्थाको विकल्प समाजवादी व्यवस्था भएको संसारको इतिहासले प्रस्ट बनाइसकेको छ ।
अमेरिकामा देखिएका ‘सुन्दर’ दृश्य, त्यो हलिउडको कुनै दृश्य थिएन